Ny iPad Pro 2018 dia mifanaraka amin'ny fenitry ny kalitaon'ny Apple | Vaovao IPhone
Andro vitsy lasa izay hoy izahay taminareo como el nakambana ny singa sasany amin'ireo maodely iPad Pro vaovao tamin'ity taona ity na dia ao anaty boaty aza.
Ary koa, hatramin'ny nanombohany, misy fisalasalana sy fitsapana maro ao amin'ny YouTube izay nanamarinay fa hitombo avo roa heny izany mora foana.
Mazava ho azy, noho ny habeny sy ny halavany dia ara-dalàna raha afaka miondrika izy, na dia tsy tokony hitranga isan'andro isan'andro amin'ny fampiasana mahazatra aza izany.
Na izany aza, mikasika ny iPad Pro 2018 izay avo roa heny avy amin'ny orinasa, Nahazo fanambarana izahay, izay nivadika ho tsy ofisialy, fa fantatr'i Apple ity hetsika ity ary noheveriny ho ara-dalàna.
ankehitriny, Dan Riccio, filoha lefitry ny fitaovana amin'ny Apple, dia namaly ireo fanambarana ireo manome tahirin-kevitra marina momba ny fizotry ny famokarana anao.
IPad Pro dia mety hiondrika fa tsy mihoatra ny 400 microns (0,4 milimetatra) izay henjana kokoa noho ny tarika iPad taloha.
Manokana, hoy izy:
Raha miresaka ny olana mifandraika amin'ny iPad Pro vaovao, aryNy famolavolana unibody an'ny iPad dia mihaona na mihoatra ny fenitra avo lenta an'ny Apple momba ny kalitao sy ny marim-pototra amin'ny famokarana. Izahay dia mandrafitra tsara ny iPad ary ny ampahany rehetra amin'ny asany dia refesina sy voafehy tsara.
Ny fepetra arosonay amin'izao fotoana izao momba ny fahamoran'ny iPad Pro dia mamela antsika hatramin'ny 400 micrometro marindrana, izay mbola voafetra kokoa noho ny teo aloha. Ity sisin-kazo mikrô 400 ity dia latsaky ny antsasaky ny milimetatra (na ny hatevin'ny taratasy kely mihoatra ny 4 ny ankamaroany), ary io fiovana io dia tsy hiova mandritra ny fampiasana ara-dalàna ny ain'ny fitaovana. Mariho fa ireo fiovaovana ireo dia tsy hisy fiantraikany amin'ny fiasan'ny fitaovana amin'ny fomba rehetra.
Manaraka ireo fanambarana ireo, daholo hitantsika ny fomba nikirakiran'ny iPad Pro sasany tamin'ny fihoaran'ny mihoatra ny 0,4 milimetatra. Fantatray fa hiafara hisolo ireo fitaovana ireo i Apple, satria tsy hanaraka ny fenitra napetrany izy ireo, saingy tokony haseho ihany koa fa niditra tao anaty boaty toy izany ny iPad Pro ary tsy nampiasainay izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » iPad Pro » Ny iPad Pro 2018 dia mifanaraka amin'ny fenitra kalitaon'ny Apple